सुजुकीको स्मार्ट हाईब्रिड ‘एक्सएल सिक्स’, के छन् त बिशेषता ?
Home / Blogs / सुजुकीको स्मार्ट हाईब्रिड ‘एक्सएल सिक्स’, के छन् त बिशेषता ?
सुजुकी कारको नेपालस्थित अधिकृत आयातकर्ता सिजी माटोकर्पले दोस्रो मल्टीपर्पोज भेहिकल (एमपिभी) ‘एक्सएल सिक्स’ सार्वजनिक धेरै समय भएको छैन । यसअघि एमपिभी सेग्मेन्टमा सुजुकीको अर्टिगा आएको थियो । एक्सएल सिक्स भने युरो ६ (जसलाई भारतमा बिएस ६ भनिन्छ) मापदण्डमा आधारित छ । यो मापदण्डका कारण कारले कम प्रदूषण गर्ने, कम इन्धन खपत गर्ने विशेषता राख्छ ।
नेपालका लागि सुजुकीको आधिकारिक वितरक सिजी मोटोकर्पले नडा अटो सोमा स्मार्ट हाईब्रिड ‘एक्सएल सिक्स’ सार्वजनिक गर्यो। यी गाडीमा रहेको ब्याट्रीबाट पनि इन्जिन स्टार्ट हुने भएकाले इन्धन खपत न्यून गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। इन्धन खपत कम गर्ने हुँदा वातावरणमैत्री भएको कम्पनीको दावी छ।
५ स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसन भएको १४६२ सिसि पेट्रोल इन्जिनको ‘एक्सएल सिक्स’ ६००० आरपिएममा ७७ किलोवार्ट पावर र ४४०० आरपिएममा १३८ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ। ४५ लिटर फ्युल क्यापसिटी भएको यस ‘एक्सएल सिक्स’ले १९.०१ किलो मिटर माइलेज दिने कम्पनीको दावी छ।
कारलाई आक्रमक लुक्स दिन सुजुकीले सिग्नेचर ग्रिलमा थोरै परिवर्तन गरेको छ र क्रोम डिजाइन दिएको छ । जसकारण कारलाई प्रिमियम लुक्समा देखाउन सकिएको छ । दुवैतर्फको हेडल्याम्पमा ४–४ च्याम्बर बनाएर बल्ब राखिएको छ र क्वाड डिजाइन दिइएको छ । जसकारण फराकिलो ठाउँसम्म प्रकाश फाल्न मद्दत मिल्छ । सँगै डिटाइम रनिङ लाइट पनि राखिएको छ ।
कारमा रहेको फिचर राजमार्गको यात्रा गर्दा प्रयोग गर्न सकिन्छ । राजमार्गमा समान गतिमा दौडनका लागि क्रुज कन्ट्रोलमा कारलाई छाडिदिएपछि ४० किलोमिटर प्रतिघन्टाको रफ्तारमा आफैँ दौडिन्छ । योवेला एक्सिलेटर दबाउनुपर्दैन । यो प्यानलमा धेरै कुराको जानकारी दिने डिजिटल डिस्प्ले राखिएको छ । यहाँ इन्धन खपत, इनर्जी फ्लो, ट्रिप डिटेल, ड्राइभिङ रेन्ज, गियर सिफ्टलगाय हेर्न सकिन्छ ।
यसमा रहेको इन्जिन पुस स्टार्ट स्टार्ट÷स्टप विथ स्कार्ट की, अटो एसी, बोतल होल्डर, १७.८ सिएम टच स्किृन स्मार्ट प्ले स्टुडियो, भ्वाइस कमाण्ड, ब्लु तुथ कनेक्टीभिटी, लेदर सिट लगाएतको विशेषताले यसलाई उत्कृष्ट बनाएको छ। डेल्टा र अल्फा गरी दुई भर्जनमा भर्सनमा उपलब्ध यो गाडीको मूल्य यसको मूल्य ४६ लाख ९९ हजार र ४७ लाख ९९ हजार रहेको छ।